ညိုထက်ညို - တစ္ဆေကြီး - MoeMaKa Media
Home / Coup / Essay / Literature / Nyo Htet Nyo / ညိုထက်ညို - တစ္ဆေကြီး
ညိုထက်ညို - တစ္ဆေကြီး
Coup, Essay, Literature, Nyo Htet Nyo
(မိုးမခ) ဇွန် ၅၊ ၂၀၂၁
အဲဒီနေ့ မနက် ခြောက်နာရီ ထိုးကာနီး လောက်မှာ ကျွန်တော် အိပ်ရာ က ထတယ်။
နောက် နာရီဝက် လောက်နေတော့ အနော်ရထာလမ်း နဲ့ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း ထောင့် ကို ကျွန်တော် ရောက်တယ်။
မနက်ခင်း ဟာ နိုးနေပါပြီ …. ကျီးကန်းတွေလည်း အာနေကြပါပြီ ။ ဟိုဘက်ထောင့် ဒီဘက်ထောင့် က တွေ့နေကျ မနက်ပိုင်း အတွင်းဝန်ရုံး ကို ပတ်ပြီး လမ်းလျှောက်နေသူတွေ ပြေးနေကြသူတွေကို လည်း မြင်နေရပါပြီ။
အဲဒီကနေ အစပြုလို့ အတွင်းဝန်ရုံး ကို ကျွန်တော် လမ်းပတ်လျှောက်ခဲ့တာ တစ်နာရီ လောက် ကြာတယ်။
…………………………. ………………………… ……………………….
ကိုးနာရီ လောက်ကျရင် သွားစရာ တစ်ခု ရှိတာနဲ့ လမ်းလျှောက်နေတာကို ကျွန်တော် ပြန်ရပ်လိုက်ပြီး အိမ်ကို ပြန်ရောက်လာတော့ ရှစ်နာရီ ထိုးဖို့ ဆယ်မိနစ် လောက်ပဲ လိုတော့တယ်။
အဲဒီမှာပဲ ကျွန်တော် အဝတ်အစား မလဲသေးဘဲ အိမ်ရှေ့မှာပဲ မောမော နဲ့ ခဏ ထိုင်နေမိတယ်။
အဲဒီမှာပဲ ရှစ်နာရီ ထိုးကာနီး လောက်မှာ ခပ်လှမ်းလှမ်း အနော်ရထာ လမ်း ဘက်ကနေ ‘တို့အရေး တို့အရေး’ ဆိုတဲ့ အသံ သဲ့သဲ့ ကို ကျွန်တော် ကြားရတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ ဝရံတာ ကို ကျွန်တော် ထွက်ပြီး အနော်ရထာ လမ်းမဘက်ကို မျှော်ကြည့်လိုက်မိတယ်။
…………………………… ………………………… ……………………………
မြင်နေရတဲ့ မြင်ကွင်း ကတော့ တကယ့်ကို အပြေးအလွှား တကယ့်ကို ကသုတ်ကရက် လို့ ဆိုရမှာပါပဲ။
သဲသဲကွဲကွဲ အပြည့်အစုံ မကြားရပေမယ့် ပီပီသသကြားနေရတဲ့ တို့အရေးအသံတွေ ကြားမှာ လက်ချောင်း သုံးချောင်းထောင်ပြီး အပြေးတစ်ပိုင်း အနော်ရထာလမ်းပေါ် မှာ ဆန္ဒပြရင်း လျှောက်လာကြတဲ့လူငယ်ကလေး တွေကို ဝရံတာကနေ ကျွန်တော် လှမ်းတွေ့နေရတယ်။
သူတို့ရဲ့ နောက်မှာတော့ အနီရောင် အလံကြီး တစ်ခုကို ကိုင်ရင်း လျှောက်လာကြတဲ့ လူငယ်ကလေး တွေ ပါတယ်။
နောက်ထပ် တွေ့ရတာက ဘာတွေ ရေးထားမှန်း ကျွန်တော့် ဝရံတာ ကနေ မမြင်ရတဲ့ ပိတ်စ အရှည်ကြီး ကို ကိုင်ပြီး လျှောက်လာကြတဲ့ လူငယ်ကလေးတွေ ဖြစ်နေတယ်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် က စပြီး လူထု ဆန္ဒပြပွဲ တွေကို ကျွန်တော် စ ကြုံခဲ့သလို ကိုယ်တိုင်လည်း ပါဝင် ပြခဲ့ဖူးတာ အခု နွေဦးတော်လှန်ရေး အထိပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အခုလို အပြေးတစ်ပိုင်း ဆန္ဒပြပြီး ရဲတွေ စစ်သားတွေ ရောက်မလာခင် အလျင်အမြန် လူစုခွဲ ကြရတဲ့ လျှပ်တစ်ပြက် ဆန္ဒပြပွဲ မျိုးကို ကြုံဖူးရတာတော့ ဘဝ မှာ ဒီတစ်ခါ ပထမဆုံးပဲ ။
ရန်ကုန်မှာ အေးအေးဆေးဆေးအချိန်ယူပြီး ဆန္ဒပြကြတဲ့ဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေ အပြင်းအထန် နှိမ်နင်းခံရလို့ ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်လလောက် အတောအတွင်းမှာ ဒီလိုမျိုး ဆန္ဒပြပွဲလေး တွေ ရန်ကုန် အနှံ့ နေ့စဉ်လိုလို ရှိနေတယ် ဆိုတာ သိခဲ့ပေမယ့် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မြင်ဖူးရတာတော့ ဒါ ပထမဆုံးပဲ။
အဲဒီမှာပဲ လက်တစ်ကမ်း က အနော်ရထာလမ်း ပေါ် မှာ တွေ့နေရတဲ့ လေးငါးခြောက်ဆယ် လောက်တော့ ရှိမယ့် လူငယ်ကလေး တွေ လူစုခွဲပြီး အပြေးအလွှား ဘေးက လမ်းသွယ်တွေထဲကို ဝင်ပြေးကြတယ်။
အဲဒီမှာပဲ ကျွန်တော့် တိုက်ရှေ့ကနေ ဖြတ်ပြီး လမ်းထဲကို ဝင်ပြေးတဲ့ သူ တွေကလည်း ဝင်ပြေးလာတယ်။.
အဲဒီမှာပဲ အနော်ရထာလမ်းမ ပေါ်မှာ သေနတ် တွေနဲ့ စစ်သား လေးငါးဆယ်ယောက် အပြေးအလွှား ရောက်လာကြတာ ကျွန်တော် တွေ့လိုက်ရတယ်။
……………………………….. …………………… …………………………...
ကျွန်တော် မြင်နေရသလောက် ကတော့ ဆန္ဒပြ ကြတဲ့ လူငယ်ကလေးတွေ တစ်ယောက်မှ အဖမ်းမခံရဘဲ လွတ်မြောက်သွားကြတယ်။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီမှာပဲ အထက်လမ်း ဘက်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ အသားကုန် ပြေးနေတဲ့ ချာတိတ်လေး တစ်ယောက် နောက်ကို အပြေး လိုက်နေကြတဲ့ စစ်သား သုံးလေးယောက် ကို ဝရံတာကနေ ကျွန်တော် လှမ်းတွေ့နေရတယ်။
လမ်းတကာ့ လမ်း ထဲမှာမှ ဟိုး ထိပ်ဆုံးမှာ အထက်တန်းကျောင်း ရှိတဲ့ လူရှင်းပေ့ ဆိုတဲ့ ၃၇လမ်း အထက်လမ်း ထဲမှ ဝင်ပြေးမိလျက်သား ဖြစ်သွားတာ ချာတိတ် ကံဆိုး သွားတယ် ပြောရမယ်….ဟိုဟိုဒီဒီ သွားနေလာနေ ကြတဲ့ လူတွေထဲ ရောလိုက်ဖို့ အခွင့်အရေး မရှိတော့ဘဲ တောက်လျှောက်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်လမ်းဘက် ကို ပြေးနေတဲ့ ချာတိတ် နဲ့ သူ့နောက်က လိုက်နေတဲ့ စစ်သား တစ်ယောက် ကို ကျွန်တော် တန်းတန်းကြီး ကို လှမ်းတွေ့နေရတယ်။
အတော်ကလေး ဝေးသွားတော့မှ ကျွန်တော့် မြင်ကွင်းကနေ ချာတိတ်ကော စစ်သားကော ပျောက်သွားတယ်။
လွတ်သွားမလား အမိပဲ ခံသွားရမလား ကျွန်တော် စဉ်းစားနေရင်းနဲ့ ဝရံတာ မှာ ငါးမိနစ် လောက် ထပ်နေပြီး အိမ်ထဲ ပြန်ဝင်လာခဲ့တယ်။
……………………….. ………………………. ………………………….
အင်တာနက် ခေတ် ဆိုတော့လည်း သတင်းတွေဟာ မြန်ပါတယ်…. နောက် နာရီဝက် လောက် ကြာတော့ စောစောက မြို့ထဲက လျှပ်တစ်ပြက် ဆန္ဒပြပွဲ သတင်းက လိုင်းပေါ် တက်လာတယ်။
တစ်ဆက်တည်း သတင်း ဓာတ်ပုံ နဲ့တကွ တိတိကျကျ စောစောက အထက်လမ်းထဲ ထွက်ပြေးသွားတဲ့ ချာတိတ် ကို ခေါင်း ကို လက်နှစ်ဖက် မြှောက် နောက်ပြန် ကိုင်ခိုင်းထားပြီး ကုပ်ဆွဲ ပြီး ခေါ်လာတဲ့ မီးလောင်သွားတဲ့ Ruby Mart ရှေ့က စစ်သားတစ်ယောက် ပုံ လည်း တက်လာတယ်။
နောက် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ မှာတော့ Ruby Mart ရှေ့က ပလက်ဖောင်း ပေါ်မှာ ခေါင်းကို လက်မြှောက် နောက်ပြန်ကိုင်ပြီး ကုပ်ကုပ်ကလေး ချာတိတ် ထိုင်နေတာ တွေ့တယ်။
ဒုက္ခပါပဲ… ဟိုအရင် ကနဦး တုန်းကလို အင်းစိန် မှာ နှစ်ပတ်သုံးပတ် နေပြီး ပြန်လွတ်နိုင်တဲ့ အချိန် လည်း မဟုတ်တော့တော့ ချာတိတ်တော့ တရားစွဲ ခံရပြီး ထောင်ထဲမှာ နှစ်နှစ် သုံးနှစ်လောက် လွတ်ငြိမ်း တွေ ဘာတွေနဲ့ မကြုံသရွေ့ နေရတော့မယ့် ကိန်း ရှိတယ်။
အဲဒီလို တွေးမိရင်း နဲ့ တစ်ဆက်တည်း နိုင်ကျဉ်းဟောင်း ပြီးခဲ့တဲ့ လွှတ်တော် သက်တမ်း မှာ လွှတ်တော်အမတ် ဖြစ်သွားသေးလား မသိကြားလိုက်မိသေးတဲ့ ကဗျာဆရာငြိမ်းသစ် ရဲ့ ထောင်ထဲမှာ ထောင်ဝါဒါတွေ ရိုက်သတ်ခံရပြီး ကျဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ကြီးဝင်းဗိုလ်အတွက် အမှတ်တရ ရေးခဲ့တဲ့ ‘တစ္ဆေကြီး’ ကဗျာထဲက ပါဒလေး တစ်ပိုဒ်ကို သတိရလာတယ်။
‘ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ညံ့ခဲ့ကြတယ်
စာကလေး ကို ကျီးထိုးသုတ်တာ မြင်ပါလျက်
လှန့်မထုတ် နိုင်တဲ့ ဘဝမျိုး နဲ့
ကျွန်တော်တို့ ညံ့ခဲ့ကြတယ်’ တဲ့ ….
ဟုတ်ပါတယ်…. ငြိမ်းသစ် ပြောတာ အမှန်ပါပဲ …. တကယ့်ကိုပဲ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ညံ့ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီလို ညံ့ရင်း နဲ့ပဲ ဟိုတုန်းက မစုစုနွေး တို့ ကိုထင်ကျော် တို့ နဲ့တကွ အခြားအခြား တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ အပေါင်းကို လူထူထပ်ရာ လူတွေရဲ့ မျက်စိ ရှေ့မှောက် မှာကို လူအချင်းချင်း က အတင်းအဓမ္မ ဝိုင်းဝန်း ဖမ်းဆီးတာကို တစ်ချက်ကလေးမှ မကန့်ကွက်ရဲ မစွက်ဖက်ရဲ ဘဲ ငုတ်တုပ် ရပ်ကြည့်နေမိ ကြတဲ့ အဖြစ်မျိုး နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရှက်ဖွယ်လိလိ ညံ့ခဲ့ကြပါတယ်။
တိုတို ပြောရရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ တစ်တိုင်းပြည်လုံး ရဲ့ လူ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကို တစ္ဆေကြီး တစ်ကောင် ခြောက်လှန့်နေပါတယ်။
တစ်တိုင်းပြည် လုံး နဲ့ ယှဉ်ရင် အရေအတွက် မပြောပလောက် တဲ့ လက်တစ်ဆုပ်စာ လူတစ်စု ရဲ့ အကျိုးစီးပွား အတွက် သက်သက် ဖြစ်တည်နေတဲ့ စစ်အာဏာရှင် စနစ် ဆိုတဲ့ တစ္ဆေကြီး တစ်ကောင် အကြီးအကျယ် ခြောက်လှန့်နေပါတယ် ။ ။
ညိုထက်ညို - တစ္ဆေကြီး Reviewed by k on 12:32 PM Rating: 5